'Eyona Mibongo yaseMelika' Umhleli weeNdwendwe uSherman Alexie Ucela uxolo 'ngePseudonym Bullshit' - Iincwadi
'Eyona Mibongo yaseMelika' Umhleli weeNdwendwe uSherman Alexie Ucela uxolo 'ngePseudonym Bullshit'
Iposwe ngoSeptemba 9, 2015, 5:12 pm poetryfoundation.org
UMichael Derrick Hudson
Owona Mbongo ubalaseleyo waseMelika ngo-2015 Umhleli weendwendwe uSherman Alexie wathumela iimbongi ze-anthology nge-imeyile, ecela uxolo ngenxa 'ye-mess damn' eyenziwe xa kutyhilwa ukuba imbongi uMichael Derrick Hudson yapapashwa phantsi kwegama laseAsia.
Le mbongi ithe yasebenzisa igama elithi Yi-Fen Chou njengeqhinga lokwandisa amathuba okuba imibongo yayo ipapashwe kwi. Owona Mbongo ubalaseleyo waseMelika ngo-2015 .
Kwi-bio yakhe ye-anthology, u-Hudson wathi umbongo wakhe othi 'Iinyosi, iintyatyambo, uYesu, amaNgwe aMandulo, uPoseidon, uAdam noEva,' wakhatywa izihlandlo ezingama-40. Xa usebenzisa igama elinguzenzele, lo mbongo wakhatywa izihlandlo ezisithoba ngaphambili Prairie Schooner yayithatha.
NgoMvulo, uSherman Alexie, umhleli weendwendwe ze anthology , wasikhusela isigqibo sakhe sokupapasha lo mbongo nasemva kokufunda ukuba ungubani na uYi-Fen Chou. U-Alexie uthe wanikela ingqalelo kwimbongo ka-Hudson ngenxa yokuba wayecinga ukuba imbongi yayingubani.
Ndiyimbongi emdaka ngebala enike ithuba elingcono enye imbongi ekucingelwa ukuba inebala elimdaka ngenxa yobumdaka bethu, utshilo iposti yebhlog.
U-Alexie uthe i-nepotism 'ixhaphake njengeoksijini' kwihlabathi lemibongo.
'Kodwa, ekubekeni u-Yi-Fen Chou kwiimfumba 'mhlawumbi' kunye no 'ewe', ndenze into engaqhelekanga. Ndanceda umntu endingamaziyo kwaphela ngenxa yocalucalulo lobuhlanga,” wabhala watsho.
Eyona Mibongo igqwesileyo yaseMelika umhleli uDavid Lehman uthe u-Alexie nguye kuphela ophetheyo ekukhetheni imibongo ka-2015.
imihombiso ekhethekileyo yekrisimesi yangaphandle
Emva kokufumanisa ukuba ngubani oyinyaniso ka-Hudson, 'uSherman wayefuna ukugcina umbongo encwadini,' watsho uLehman kwingxelo kwiMC chatel. 'Kukho imbali ende yeepeni-amagama kwiincwadi, kwaye siye sapapasha izibongo ezingaziwa kwi-BAP kwixesha elidlulileyo.'
Emva kwesi sityhilelo, iimbongi ezininzi zavakalisa inkxalabo malunga nesigqibo.
NgoLwesibini, u-Alexie wathumela i-imeyile kwezinye iimbongi kwi-anthology, exolisa nge-'Pseudonym Bullshit.'
Funda i-imeyile epheleleyo, efunyenwe yi-MC chatel, ngezantsi:
Iimbongi ezithandekayo zaseMelika,
Ndiyaxolisa ngokuthumela oku njengeqela lomyalezo kodwa bendifuna ukunifumana nonke ngaxeshanye.
Ndiyaxolisa ngokuba le Pseudonym Bullshit ithathele ingqalelo kakhulu kuyo yonke imibongo yenu emikhulu. Bendiphinda ndifunda i-anthology imini yonke kwaye ndiye ndathuthwa, ngokuphindaphindiweyo, ukuya kuloo mzuzu umnandi xa ndiqala ukufunda nganye yazo.
Ndisakholwa— Ndiyazi -Owona Mbongo ugqwesileyo waseMelika kulo nyaka ngumbhiyozo wenguqu wetalente yesihobe kunye nokwahluka. Kwaye ndiyathemba ukuba le ngxabano kungekudala iza kuphela kwaye imibongo yenu iya kuvuka kwaye ibhiyozelwe ngendlela ebekufanele ukuba ibhiyozelwe ngayo.
Kwaye, ewe, ndiyabahlonipha abo kuni banokungavumelani nesigqibo sam sokugcina umbongo kwi-anthology. Kwaye ndiyasiqonda isizathu sokuba ungafuna ukuzahlula kwi-anthology nakum.
Ndizoqhubeka nokuba ngumlandeli wenu nonke zimbongi ezimangalisayo nokuba niziva njani ngale mess damn. Kwaye ndiza kuqhubeka nokuba ngumlandeli wakho nokuba zeziphi na izimvo zoluntu okanye zabucala ekufuneka uziveze.
Ifika koku: Ndiyayithanda imibongo yenu-yonke-kwaye ndiwongekile ukwabelana nani ngesi sibongo.
Mina amathambo alungileyo sana
Ngezantsi ingxelo epheleleyo kaDavid Lehman:
Ukhetho lwe-EYONA IMIHOBE YASEMERIKA YEnziwa minyaka le ngumhleli ondwendweleyo. Siqinisekisa ukuzimela kwaloo mntu. USherman Alexie wawufunda lo mbongo kuthethwa ngawo, wawuthanda, wongeza kuluhlu, kwaye wasinda kwinkqubo ebuhlungu xa uluhlu kufuneka luthenwe lubuyele kwi-75.
Sasikwimveliso xa safunda ukuba ngubani oyena mbhali. UPrairie Schooner, iphephancwadi apho umbongo uvela khona, wayengazi ukuba 'uYi-Fen Chou' ngokwenene 'nguMichael Derrick Hudson.' Emva kokuba siyifumene loo nto, uSherman wafuna ukugcina lo mbongo encwadini. Kukho imbali ende yeepen-names kuncwadi, kwaye sipapashe imibongo engaziwa kwi-BAP kwixesha elidlulileyo.
Sasiselubala. Icandelo lamanqaku abanikeli kwincwadi lenza kucace ukuba ngubani ngokwenene 'Yi-Fen Chou'. Xa ebuzwa ukuba kutheni ekhethe igama elingeyonyani, uMnu. Hudson waphendula ngeziqendu ezibini esizipapashiweyo-kwangoko emva kwegraf yakhe yebhayolo nangaphambi kokuba aphawule ngombongo okwiphepha 167.
I-tygers yomsindo inomsindo ngaphezu kwamahashe okufundisa, kodwa kufuneka kuthiwe imbongo kunye nesiqendu sonke sivelisa imibuzo kungekhona nje ngezopolitiko kunye noluntu kodwa malunga neendlela zokubhala kunye neprotocol. Emva kwayo yonke loo nto, sinemizekelo kaBorges, Pessoa, kunye nabanye abaye benza ii-pseudonyms kunye 'ne-heteronyms' kwaye babonisa amandla abo okudala. Sikwakhe saba namaxoki eentlobo ngeentlobo, amanye enzelwe ukukhulisa iziko okanye umkhwa. Kukho umbuzo omkhulu phaya. Ukuba umntu ufunda umbongo ngokuthi, umntu ochongiweyo njengoEmily Randolph, asinabo ubungqina bokuba uEmily Randolph ukhona. Ngaba lo ngumsebenzi wolwimi, iziphumo ezilahlekisayo eziye zandiswa yi-Intanethi? Yi-conundrum ye-metaphysical egqibeleleyo kwixesha lenyani yenyani.
Umbhali oMhlophe wenza uMbongo ogqwesileyo-Ngegama losiba laseAsia
Isoftware evulekileyo yoyilo lendlu
Izimvo zokutya zeHalloween zetheko
iindlela ezintsha ekhitshini